Eegdooti Warraaqsa Oromiyaa (EWO) Eenyu ? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooEegdooti Warraaqsa Oromiyaa (EWO) Eenyu ?
Eegdooti Warraaqsa Oromiyaa (EWO) Eenyu ?
Eegdooti Warraaqsa Oromiyaa Eenyu ?
Hagayya 23, 2020
ABOn biyyatti erga galee booda walii-galtee Asmaraatti taasifame OPDO’n haaluu jalqbde! Oromoonis gamtokko akka waan bilisoomeetti dhiichisuun ABO irratti dhiibbaa garaagaraa gochuun akka mootummaa jijjiiramaa/ce’umsaa maqaa hedduun waamamu akka deggeru fi wajjin tokkummaa uumu godhame. Dhiibbaa kana kan gochaa turemmoo OPDO/ODP, Activistoota biyya alaa media of harkaa qaban fi Jawaar Mahaammad turan. Gaaddisa Hoggansa Oromoo (GHO) kan jedhu as ba’uun Lammaa Magarsaa akka hogganu taasisuun dhaabboliin Oromoo 7 kan keessatti hirmaatan hundeeffame. Shirri akkuma fufetti adeemuun PPn hundeeffama jala Abiy Gaaddisa kana akka hogganu taasifame. Haala hin beekamneen EPP’n hundeeffamnaan GHOn coolligee hafe. As keessatti kan beekamuu qabu dhiibbaa kallattii garaagaraan malee ABOn hundeeffama GHO kana irraa quufa hin qabu ture. Nutis akka deggeraa ABO tokkotti GHO kana ija shakkiin ilaaluun mormaas turre! Kan nama dhibu immoo ODPn maqaa gara Ethiopia Prosperity party (EPP)tti jijjiirrattee hogganuu isheedha.
Erga GHOn coolligee immoo ABOn akka #Gamtaa hundeessu taasifame. Gamtaan sun garuu akka baquutti ilaalamaa ture. ABOn gamtaa sana fudhatee dhaaboota hundaaf waamicha taasisuun kan owwaate KFO fi PBO qofaadha. ABO, KFO fi PBOn Gamtaa jalatti wajjiin haasa’uu jalqaban. Shirri askeessatti deebi’ee dhalate! Jawaar fi Activistoonni alaa fi keessaa Gamtaan kun gara baqiinsaatti akka jijjiiramu dhiibbaa gochuu jalqaban! Jawaar KFO keessa waan makamee tureef activistoota KFO keessa jiraniin oduun afarfamu tokko as ba’e. Innis Gamtaan kun akka dhaaba tokkotti as ba’uufi innis Jawaarin hoggana godhatee dhalachuuf deema jechuun social media irratti olola garaa garaa oofuu jalqabnaan nutis akka deggeraa ABO tokkootti dhaabni Kaayyoo garaa garaa qabu Gamtaadhaan hojjechuu malee baqiinsa akkamii taasisa jechuun dura dhaabbanne.
Utuu hin turiin J/Kamaal Galchuu media Habshootaa fi kan biraa irratti komii kaasuu jalqabe! Gamtichis ABO fi KFOn akkuma dur dhoksaan walfaana hojjechaa turanitti wajjiin Gamticha fudhatanii itti fufan.
ABOn akka Itoophiyaattis dhaabota bosonatti wal beeku fi biyyatti dabalate faana qabsoo karaa nagaan dhaaboota 9 faana Gamtaa dabalataa uumuun hojjii itti fufe. KFOnis humnoota federal ta’aan 4 faana hojjechuu itti fufan.
Yaaliin shiraa karaa Activistootaas ta’e ODP ABO fi KFO irratti taasifamaa ture laafaa dhufuun, bifa biraa jijjiirratee ABO irratti dhiibbaa ifatti muldhatu waajjiraalee cufuu fi miseensotaa fi deggertoota hidhuutti gadi taa’an. Kan KFOs carraan kanuma ta’e. Kana gidduutti lafa jalatti kan hojjatamaa ture ta’us ifatti kan of labse
#EegdootaWarraaqsaOromiyaa (EWO) Fulbaana 20, 2019 ifatti of labse.
Dhaabbanni kun humnoota caasaa Mootummaa keessaa Janaraaloota, tika, hogganoota mootummaa, humnoota Itoophiyaa, dhaabota Oromoo keessaa walitti makamuun dantaa Oromoo fi Oromiyaa kan tiksan, kan dhaabaa fi humna kamiifuu hin baabsine ta’uu isaanii ibsuun kan dantaa Oromoo fi Oromiyaa irratti aggaamamu kamiyyu kan qolatan ta’uu ibsa isaanii yeroo garaagaraatti baasan irraa ilaaluun ni danda’ama. Humni kun ijaarsa gadi fagoo fi caasaa baldhaa qabaachuutu odeeffama. Fedha fi dantaa angoo irraa kan walaba ta’e garuu hegeree Oromoo fi Oromiyaa irratti cimee kan hojjatu fi dhaaboota Oromoo hunda, QBO fi WBO kan deggeru akka ta’e ibsa baasaa jiran irraa hubachuun ni danda’ama!
Dhimma EWO irratti shakkii fi burjjaajjiin uumame eessa birattidha?
1. Dhaabbanni kun utuu baayyee of labsee Oromoo biratti hin beekamiin Activistiin biyya alaa tokko dhimma kana irratti akka ABO, KFO fi PBOn ijaarratan fakkeessee barruu tokko maxxanse. Kun immoo akkuman armaan olitti tuquu yaaletti GHO fi Gamtaan gaafa hundeeffamu dhaabota ABO fi KFO caalaa kan afarsaa ture ODP fi Activistoota waan tureef EWOn Oromoo, deggeraa fi miseensa ABO biratti akkuma GHO akka shakkamu taasiseera. Namoonni dhunfaa fi Qeerroon utuu hin hafiin page #EzelOromia kan jedhu qeeqaa turan.
2. EWOn akka of labsetti media fayyadamuun akeekaa fi kaayyoo isaa ummata Oromootti labsuu irraa duubatti harkifachuun isaa immoo kan caalu burjaajjii uumera. Akkuma baratame qaamuma bara 2018 qabsoo Oromoo buteetu dhaaba kan biraa hundeeffatee as ba’e jechuun shakkiin uumame!
3. Dhaabbanni akka EWO siyaasa Oromoo keessatti kan hin baratamne haaraa ta’uu isaa irraa kan ka’e shakkii fi burjaajjii uumeera.
Ergan kana jedhee booda akka gorsaatti dhaabbanni kun ammas dubbii himaa isaatiin sirriitti media fayyadamuun Oromoo gaachana fi eegduu dhugaa ta’uu isaa barsiisuu qaba jedheen amana akka dhuunfaakootti.
Hamman odeeffadhe fi hubannaa qabuutti paartii siyaasaa barcuma fi angoof dorgomu utuu hin ta’iin akkuma maqaa isaa (Eegdoota Warraaqsa Oromoo) ta’ee qabsoo Oromoo gaggeeffamaa jiru humnaa fi qaama kamirraayyuu akka hin butamne fi hin jallanne kunuunsee galmaan ga’uu fi Bilisummaa Oromoo boodas qaama Oromoo fi Oromiyaa tiksu akka ta’udha.
Odeeffannoo haaraa fi dabalataa yoon argadhe qabadheen deebi’a. Tarii qaamoonni dhaabbanni kun burjaajjii isin keessatti uume barruu kanarraa hamma tokko odessa argattu jedheen amana!
EWO/ORG jabeessaa kan keessani!
Eegdooti ummata Oromoo fi Oromiyaa WBO dha. WBO jabeessaa malee waan mataa fi milli hin beekamneen burjaajii dabalataa hin omiishinaa.